တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ စာစစ်ဌာန ယမန်နှစ်ကထက် ၁၄ဝ ခန့် တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်မည်. - Yangon Media Group
ယခု ပညာသင်နှစ်၏ တက္ကသိုလ်ဝင် တန်းစာမေးပွဲအတွက် စာစစ်ဌာန အရေအတွက်ကို ယခင်နှစ်ကဖွင့် လှစ်သည့် ပမာဏထက် ၁၄ဝ ခန့် တိုးမြှင့် ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၁၉ ခုနှစ်တွင်ဖြေဆိုမည့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူ ကိုးသိန်း ခန့်ဝင်ရောက်ဖြေဆိုရန် စာရင်း ပေးသွင်းထားကြောင်း ယခုနှစ် တွင် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းဖြေဆိုသူ အရေအတွက်မှာ ယခင်နှစ်က ထက်ငါးသောင်းခန့် ပိုမိုလာသည့် အတွက် စာစစ်ဌာနကိုလည်း ယခင်နှစ်ကဖွင့်လှစ်ခဲ့သောအ ရေအတွက်ထက် ၁၄ဝ ခန့်တိုး မြှင့်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ယင်း အတွက် ယခုနှစ်တွင် စာစစ်ဌာန အရေအတွက်မှာ ၁၈ဝဝ ကျော် ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ စာစစ်ဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
”တိုးမယ့်အရေအတွက်နဲ့ လျော့မယ့်အရေအတွက်က အ တည်တော့မဖြစ်သေးဘူး။ စာဖြေ တဲ့သူအရေအတွက်က တိုးလိုက် လျော့လိုက်ဖြစ်တတ်လို့ ၁၄ဝ လောက်ကိုပဲ တိုးပြီးဖွင့်ဖို့လျာထား ရသေးတာ”ဟု မြန်မာနိုင်ငံစာစစ် ဦးစီးဌာနမှ အရာရှိတစ်ဦးက နိုဝင် ဘာ ၁၁ ရက်က ပြောသည်။ နှစ်စဉ်ကျင်းပနေသောတက္က သိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကို ဝင် ရောက်ဖြေဆိုသူအရေအတွက်မှာ တစ်နှစ်လျှင် ငါးသောင်းခန့်တိုး လာနေသည့်အတွက် ဖြေဆိုရမည့် စာစစ်ဌာန အရေအတွက်များကို လည်း ပိုမိုးတိုးမြှင့်ချထားရသလို စာစစ်ဌာနတွင် တာဝန်ယူရမည့် ကြီးကြပ်ရေးမှူး၊ လက်ထောက်ကြီး ကြပ်ရေးမှူးများကိုလည်း ပိုမိုတိုး မြှင့်တာဝန်ပေးနေရသည်။
ပြည်တွင်းစာစစ်ဌာနများကို တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ပေးနေရသလို မြန်မာနိုင်ငံသားများရောက်ရှိရာ ဒေသတွင်လည်း တက္ကသိုလ်ဝင် တန်းစာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ နိုင်ငံ ခြားစာစစ်ဌာနများကိုလည်း ပိုမို တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ပေးနေရကြောင်း ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ကဖြေဆိုခဲ့သော တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင် နိုင်ငံခြားစာစစ်ဌာန ၂ဝ ကို ဖွင့် လှစ်ပေးခဲ့ရသည်။
အစိုးရ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို သိရှိ၊ မေးမြန်း၊ အကြံပြုပေးနိုင်မည့် website ကို စတင်ထုတ်လွှင??
မန္တလေးမြို့မှ ရေးဆွဲသည့် ဝါးပန်းချီကားများ ပြည်တွင်း၌ လူကြိုက်များလာပြီး ပြည်ပဈေးကွက်မျ?